I-Peptide Epithalon I-Acetate: Ingaba sisinye isicatshulwa sokuguga?
1. Yintoni i-Epithalon Acetate?
2. I-Epithalon I-Acetate indlela yokusebenza
3. Izicelo zeEpithalon Acetate
4. I-Epithalon I-acetate esebenzayo yokubhekisela
5. Epithalon Acetate inzuzo
6. I-Epithalon Acetate iziphumo ezichaphazelekayo
7. I-Epithalon Izimo zokugcina zeAcetate
8. Kuphi ukuthenga i-Epithalon i-acetate drug?
Ngaba wakha wakuva Epithalon acetate? Ngaba uphando ngalo kwaye ufuna ukwazi konke malunga nayo? Ukuba kunjalo, eli nqaku liyakunceda ukukwazisa ngo-Epithalin Acetate. Eli nqaku liza kuba nolwazi olunzulu malunga nale nkunkuma. Iindidi ezahlukileyo zeli nqaku ziya kuba ngale ndlela:
I-Epithalon acetate (i-CAS: 307297-39-8) luhlobo lwep peptide kwaye luyaziwa ngokuba iziyobisi eziguga. Amanye amagama apho esi saziyo saziwa yi-Epithalon, Epithalone, Ala-Glu-Asp-Gly, UNII-O65P17785G kunye nezinye ezininzi. Kuyaziwa ukuba i-Epithalon Acetate, iphuhliswa yiSt. Petersburg Institute of Bioregulation kunye neGerontology. Le nkunkuma yinto esebenzayo yokubeka i-gland encinci efunyenwe kwingqondo yethu eyaziwa njenge-pineal gland. Emva kokuphanda ngokucokisekileyo, kufunyaniswa ukuba le nkunkuma ikwandisa ubude be-telomere kwiiseli zegazi zabantu abane-60-80years. Kwisifundo esifanayo, kwafunyaniswa ukuba kulabo bantu abaye banikwe i-90% yabantu babonise iziphumo ezilungileyo.
Ngokunyusa ubude beetelomeres kwiiseli zegazi zabantu beqela elidala, kunceda ekugcineni umzimba uhlale uphelele kwaye uphilile.
Kuze kube ngoku, siyazi ukuba le nkunkuma ingasindisa ubomi kwaye isebenze njengesicatshulwa esiphakamileyo sokuguga. Kwinqanaba elilandelayo, siza kuxubusha indlela ye-Epithalon Acetate yobisi.
2. Epithalon I-Acetate Mechanism of action
Ngokuncediswa kweli nqaku, siya kukwazi malunga nendlela okanye ukusebenza kwe-Epithalon i-acetate drug in action. Epithalon acetate ibukeka nje nge powder emhlophe, le powder ingaxutyushwa ngamanzi, kodwa kwezinye iimeko, kukhethwa ukuxuba kunye nesisombululo se-1% esicacile se-acetic acid. Eli liyeza lizinzile ngokupheleleyo kwiqondo lokushisa. Izithako ze-Epithalon i-acetate iziyobisi yi-Epitalon ((S) -4- (S) -2-aminopropanamido) -5 - (((S) -3-carboxy-1 - ((carboxymethyl) amino) -1-oxopropan-2 -yl) amino) -5-oxopentanoicacid). Indlela yokwenene yile mayeza kukuba ingena ngaphakathi emzimbeni wesigulane esinezifo ezithile okanye ezininzi, emva kokungena ngaphakathi emzimbeni wesigulane ngokuhlasela ngqo ilungu okanye izicubu ezichaphazelekayo. Ukuba ngokuthe ngqo ubulala iiseli ezisasaza isifo, ngokwenza oko kubulala ngokufanelekileyo isifo.
3. izicelo Epithalon Acetate
Kule ngongoma, siya kukwazi malunga nezicelo ze-Epithalon Acetate.
Ukuguga-Isicelo sokuqala sale nkunkuma kukuba kukunceda kwinkqubo yokulwa nokuguga. Esi sidakamizwa sisetyenziswe ngokubanzi kwihlabathi ngenxa yesi sizathu ngokubanzi. Isidakamizwa se-epithalonacetate sisona sifanelekileyo kwiinjongo ezinjalo, ezininzi iintlobo zophando kwihlabathi lonke zenzeke, kwaye iziphumo zentshutshiso zonke zithembeke kakhulu, akukho mzekelo ongathandekiyo, owenziwe kuphando.
AntioxidantI-Epithalon Acetate iziyobisi isebenza njenge-antioxidant. Ngoxa uncedwa ngama-oxyoxidants akhoyo kule nkunkuma, abaninzi abantu banenzuzo enkulu. Ngoncedo lwala ma-antioxidants, umonakalo owenziwe kumaseli ethu omzimba ukususela kwimihla yethu yokusebenza iyancipha. Ukunciphisa ukulimaza kweeseli zomzimba wethu kunceda ekuphuculeni impilo yethu yonke. Zininzi ezinye iingeniso zezi ndawo ze-Epithalon Acetate iziyobisi, ezibanceda abantu abaninzi apho.
ITelomere-Iyinye into eyenziwa yile mayeza kukuba inceda ekwandiseni i-telomere kwi-cell cell. Amayeza kule njongo anikwa kuphela abantu abaneminyaka yobudala phakathi kwe-65 ukuya kwi-80 iminyaka.
ResearchInjongo- Isicelo sokugqibela sale mayeza kukuba sisasetyenziselwa injongo yophando kwizifo ezininzi ezahlukeneyo kwizilwanyana ezahlukeneyo. Kwiinkoliso ezininzi sifumana iziphumo ezilungileyo kuphela, kwaye zibuye zabulala izifo ezinjengeeseli zomhlaza kunye nezinye ezininzi, apho amaninzi amayeza angenako ukwenza.
4. Epithalon I-Acetate inzuzo
Zininzi iinzuzo ze-Epithalon Acetate iziyobisi ngaphandle kokuba inkqubo yokuguga kuphela, Siza kuxubusha ezinye iinjongo zeli ziza ezingaziwa ngabantu abavela ngaphandle-
♦ Ukwandisa ubomi
Ngaphambi kokusebenzisa le madakamizwa kubantu, uphando luyenziwe kwizilwanyana ezininzi apho kungekho zilwanyana ezonakaliswe khona; ngenxa yoko iziphumo zale phando zafika njengenyuka ye-11 kwi-17percent yempilo yezo zilwanyana. Kwizilwanyana ezahlukahlukeneyo, ubomi be-crease buhlukile.
Emva kokutshintshwa kweempawu ezi zilwanyana, emva koko le nkunkuma yenziwe ukuba isetyenziselwe abantu nayo apho eli liyeza liye labonisa iziphumo ezintle. Njengoko ufanele ukwazi ukuba ngoku ngokubanzi ubomi bobomi bendawo bukufutshane malunga neXXMUMX ukuya kwiminyaka eyi-40 kakhulu, ngoko ke ngokusetyenziswa kwesi sidakamizwa sinokunyusa le mihla ukuya kwi-50 ipesenti. Iphi ixesha lokuphila elinokunyuka ukuya kwi-16-60 iminyaka.
Xa umntu ekhula athengisa ukuba i-enzymes ekhoyo emzimbeni iqala ukuhla kwizinga elithile. Ngoko, kwimeko apho, i-epithalon acetate iziyobisi ingancedisa ukwandisa imisebenzi ye-enzyme emzimbeni wethu.
Le mi sebenzi ye-enzyme ixanduva lwezenzo zonke ezenzeka ngaphakathi emzimbeni wethu ngoncedo apho yonke imisebenzi yomzimba wethu yenzeke. Oku kwehla kumsebenzi we-enzyme kwakuyinkxalabo enzima kuba abantu babengenakukwazi ukubona iingxaki emva koko ezininzi iintlobo zophando lwe-enzyme eyenziwa ngabantu.
♦ Imfihlo yeMelatonin kunye neengqungquthela ze-circadian
Makhe ndiqale ndixelele konke malunga nokuzifihla kwe-melatonin kunye neengqungquthela ze-circadian. IMelatonin iveliswa yi-pineal gland, efunyanwa kwingqondo yethu, lo mfihlelo awubonakali kubalulekile, kodwa kubaluleke kakhulu ngenxa yokuba le mfihlo isiphumo seengqondo kunye ukuziphatha kwabantu kuxhulumene. Nangona i-circadian isingeniso yinkqubo yangaphakathi kwaye yinto engokwemvelo, oku kunceda ukuba wenze isono sokulala komntu wonke.
Kule meko, i-epthalon ye-acetate isicocisi sinceda kwiinkqubo ezahlukeneyo ezifana nokuba akukho miphumo emibi yengqondo, kwaye le nkunkuma nayo inceda ekuhambeni kwexesha lokulala. Abo banzima ukulala ngolu hlobo le nkunkuma inenzuzo kakhulu kubo.
Ngexesha lophando olwenziwe kwinqanaba kunye namagundane, ngexesha lesiphumo sale phando, safumanisa ukuba le nxalenye ye-epithalon i-acetate ivelisa iiseli ezinceda ekufeni kweeseli zomhlaza. Emva kokukwazi oku, izilwanyana ezininzi ezinomdlavuza zanikezwa umthamo weli liza, kwaye ngokumangalisa ukuba beyonyango ngokwaneleyo, njengoko isilwanyana senza zonke iiseli zomhlaza ziyafa.
Emva kokuba olu phando lwenziwe ngempumelelo, ke le nkunkuma yanikezelwa kwizigulane zomhlaza zomntu, kwaye kwimeko yabo, le nkunkuma yayisebenza kakuhle, kwaye kwezinye iimeko, yayiphilisa ngokupheleleyo. Esi sidakamizwa sisebenza ngokuthe ngqo kwiimveliso kunye namajelo athile adala umhlaza emzimbeni womntu.
Esi sifo luhlobo lwesifo seso; Kule meko, iintonga ezikhoyo emehlweni omntu ziyancipha. Le nkunkuma inceda ekunyangeni kwesi sifo seso. Esi sifo saphiliswa kuqala kwizilwanyana; nangona, xa uphando lithatha indawo yezilwanyana, ngaphezu kwe-90% yezilwanyana zaphiliswa ngokufanelekileyo. Emva koko, xa eli liyeza linikwe izigulane zabantu malunga ne-90% yezigulane zaphiliswa kwesi sifo.
♦ Ukuphucula i-antioxidant
Ndixelele ngasentla malunga nokusetyenziswa nokubaluleka kwama-antioxidants. Banciphisa inkqubo ye-cell-damaging process, ngoxa sincedisa inkqubo yokuguga. Zonke i-seissues zafunyanwa xa uphando lwenzeka kwizilwanyana. Emva kokwazi ukuba le nkunkuma inceda ekuphuculeni i-antioxidant, le nkunkuma inikwe izilwanyana ezingenayo i-antioxidant, kwaye emva kokufunda, kwaphawula ukuba le nkunkuma inceda ekuphuculeni i-antioxidants kwisitho somzimba. Emva kokubona iziphumo ezintle, le nkunkuma yanikwa izigulane ezinesifo esinjalo, isilwanyana sichaphazelekayo, kwaye sabancedisa ekunciphiseni inkqubo yabo yokulimaza.
Njengoko ufanele ukwazi ukuba yonke into inezinto ezintle kunye nemiphumo emibi nayo. Kuyafana nale nkunkuma ye-epithalon ye-acetate. Kuze kube ngoku, uyazi malunga nezibonelelo zalo mfuziselo, kodwa ngeli nqanaba, uya kukwazi malunga nomphumo wecala lonyango. Zininzi iintlobo zophando eziye zenziwe, kodwa ngoku, asifumananga nasiphi na isiphumo esisecaleni kwesi siza. Umphumo wecala kuphela esiwufumanayo kukuba njengoko sathetha ukuba i-epithalon i-acetate iziyobisi inceda ekunyuseni ubude be-telomere kwisisele segazi labantu abaneminyaka eyi-60 kwiminyaka eyi-80. Umphumo wecala kukuba kwezinye iimeko le nto, iyeza lenzile nemiphumo engalunganga nayo.
Olu phulo lucala, kwezinye iimeko, lenyuke kangangokuba ubomi babantu buye balahlekelwa ngolu hlobo.
Oku kwaba yimpembelelo yecala kuphela esiye yayiqaphela kude kube ngoku emva kokusetyenziswa kwesi sidakamizwa iminyaka emininzi. Esi sigqirha sisilwanyana esilondolozayo ubomi, kodwa iimeko ezingenzi kakuhle, okanye singatsho kuboniswe ngokubhekiselele kwiimeko ze-10%, ngelixa iimeko ze-90% ziphilise iingxaki zezigulane. ngengozi kwezinye iimeko, akufumananga naluphi na umxholo othi naziphi na izi ziko lingahambi kakuhle, iindidi ezininzi zophando kwiimeko zamatyala zenziwe, kodwa akukho nto ifike ezandleni zethu.
6. Epithalon aukusetyenziswa kwesiqulatho
Zonke izidakamizwa zinesisindo esifanelekileyo, kwaye le nto isisisombululo esibalulekileyo sinokulinganisa isilinganisi, kwaye ukuba umntu angayithathi le mayeza ngokwaloo mlinganiselo, ngoko unokusebenza kakubi kubo. Ngoko ke masiyazi malunga nomlinganiselo ofanelekileyo weli liyeza, nceda ujonge kakuhle.
Umlinganiselo weli liyeza lixhomekeke kwisifo saluphi uhlobo lwesifo othabatha le nkunkuma. Kukho iindlela ezintathu ezahlukeneyo kunye neentlobo ezintathu ezahlukeneyo zokulinganisa, kwaye zincinci ngempumelelo, ephakathi kwaye efanelekileyo kakhulu. Kuxhomekeka ngokuqinisekileyo kuwe ukuba luhlobo luni lwesilinganiso omele uthabathe ngaso, ungabonisana nogqirha wakho malunga nomyinge. Ngoko umyinge:
I-Epithalon i-acetate dosage (ubuncinane ngempumelelo)
Ixesha elide-Eli liyeza kufuneka lithathwe emva kwexesha elifanelekileyo, kunye nesichengululo sokusetyenziswa, kufuneka uthabathe eli liyeza phakathi kwe-10 kwiintsuku ze-20.
Isisiseko-Oku kuthetha ukuba malingakanani inani leyeza kufuneka lizithathe, kwaye ngu 400 kuXXUMUMX mg we-Epithalon ngosuku.
I-DailyFrequency- Ixesha eliqhelekileyo lalo mayeza li-200 mg ngokukhonza.
I-Epithalon I-Acetate dosage (esebenza kakuhle)
Eli chiza linokuthi libhajiswe ngokusebenzisa i-nasal spray okanye amaconsi, kweli nqanaba siya kukwazi malunga nokulingana okunjalo.
Ubude bexesha-Ubude beli liyeza lifana nelo ngasentla, eliphakathi kwe10 ukuya kwii-20 iintsuku.
Isisombululo-Isilinganisi seprays kunye namaconsi phakathi kwe-15 ukuya kwi-30 mg ye-Epithalon ngosuku lwe-acetateper.
I-Dailyrequency- I-frequency yansuku zonke inokuhlukaniswa zibe ngama-servings amathathu ngosuku.
I-epithalon i-acetate dosage (ininzingempumelelo)
Indlela yokugqibela phantsi kwekhonkco lokulinganisa le ndlela yenzelwa injectable. Kulo ndlela, iyeza linikezwa ijojo, kwaye le ndlela iyaziwa njengeyona ndlela ihamba phambili kwaye iphumelele. Umyinge walendlela:
Ubude bexesha-Ubude belo ndlela bufana nenye indlela, ephakathi kwe-10 kwiintsuku ze-20.
Isisombululo-Umyinge walolu hlobo ngu-5 kwi-10 mg ngosuku.
Uphindaphindiweyo- Ixesha eliqhelekileyo lala mayeza lugqithiso lwe-oneinjection ngosuku ngemitha ephantsi, ngelixa umntu angathabatha ii-injections ezimbini ngosuku ngemilinganiselo ephezulu.
Inkqubo yendlela nganye i-10 kwiintsuku ze-20, ngelixa emva kokugqitywa kwekhosi ye-10-20 yee-course kufuneka kube ne-gap epheleleyo yeenyanga ze-4to ze-6, kwaye emva koko, banokuphinda iphindi. Esi saziso kukho zonke izifundo ezintathu.
7. Epithalon Izimo zokugcina zeAcetate
Kufuneka uqaphele ebhokisini yonyango elithile apho babhale khona ngeencwadi ezinobumba. UKUBA, ngaphantsi kwebhokisi baye banikezela imeko yokugcina loo mayeza. Amanye amayeza aqulethe izinto ezinjalo kuzo ukuba azikwazi ukugcinwa phantsi kweqondo lokushisa. Ngoko ke ezo zonyango, kukho imeko efanelekileyo ekufuneka zifakwe kwaye kufuneka zikhutshwe kuphela xa kufuneka zisetyenziswe. Lo unako Epithalon yokugcina i-acetate iimeko, siza kuxubusha ngale miqathango apha.
Umqathango kuphela ophakanyisiwe apha kukuba kufuneka ugcinwe kwindawo epholileyo njengefriji.Kuthiwa ukuba igcinwe ngaphezulu kwindawo eshushu, oku kungonakalisa isiza. Kuzo zonke, kukho iipilptidi ezicocekileyo ze-98%, ezimele zifakwe phantsi kwebandalo ebandayo kwaye azifanele zigcinwe phantsi kobushushu obuchanekileyo. Oku kunokufaka impembelelo ekuhlambulukeni kweep peptides.
Oku bekuphela kwimeko yokugcina ephakanyisiwe ukugcinwa kwengqondo.
8. Wapha ukuthenga i-epithalon ye-acetate drug?
Kukho abanye abathengisi be-intanethi abathengisa lesi sidakamizwa, njengokuba eli chiza liqukethe ezinye i-amino acids. Ngoko ukuba ufuna ukuthenga i-epithalon ye-acetate drug, ngoko unokukufumana lula kwi-intanethi kwaye unokukwazi kuthenga epithalon actate. Kuya kuhanjiswa kwikhaya lakho ngaphakathi kwexesha elinikeziweyo.
Kukho abantu abaninzi abakhohlisayo apho, abathengisa imichiza engafanelekanga okanye engafaniyo kwi-intanethi, kufuneka uphande ngokufanelekileyo inkampani kunye nomthengisi ukusuka apho uza kuthenga khona le nkunkuma. Kwakhona akufanele ufumane nayiphi na imithi kumnini-mthengisi omtsha, ngokuba eli liyeza libalulekileyo kwaye lidlala indima ebuntwini kwisigulane somntu, ngoko ke loo mzekelo kufuneka uhlale ukholelwa kwaye uthenge amayeza avela kubadayisi abanamava kuphela.
Oku kwakungenxa ye-Epithalon I-Acetate iziyobisi, kweli nqaku sinokukwazi malunga nezinto ezahlukeneyo ezifana Epithalon i-acetate inzuzo, I-Epithalon acetate anti-aging feature, izicelo ze-epithalon i-acetate iziyobisi kunye nezinye izinto ezininzi malunga nale nkunkuma eyininzi yokuphila yabaninzi.
Sayazi ukuba i-Epithalon i-acetate isichengisisi sinceda ekunyuseni ubungakanani be-telomere, ekhoyo kwiiseli zegazi, ezifihlakele kwi-gland ekhoyo kwingqondo yethu. Akukuphela nje ukuba eli liyeza luza kunceda kwi-retina yamehlo enyukayo. Kusinceda ekubulaleni iiseli zomhlaza kumntu womntu.
Emva koko, siyazi malunga nokusetyenziswa kwesi sigulo kwaye sathuthukela phambili kwinxalenye apho satsho malunga nezicelo ze-epithalon i-acetate drug. Siye sazi malunga neenzuzo zesi sonyango, apho sazi malunga nezibonelelo zalo mziza.
Ukusuka kuloo nto, siyazi malunga nomyinge we-Epithalon ye-acetate drug. Umntu othabatha eli liza kufuneka alondoloze umlinganiselo weli gama kwaye kufuneka athathe amachiza ngexesha elimiselweyo. Kwinqanaba elilandelayo, siyazi ngemiphumo emibi yeliyeza, kwaye emva koko, siyazi malunga neemeko zokugcina zale mayeza. Kwakukho imeko eyodwa yokugcina, kwaye ekugqibeleni, siyazi ukuba ukusuka apho umntu angathenga le myeza kwaye yiyiphi inzathelo kufuneka ithathwe xa kuthengwa enye.